Samsung waxay diyaarineysaa isbeddello si ay u xalliso dhibaatooyinka dhaqaale | Androidsis
Kuwa ugu que natiijooyin dhaqaale oo daran oo Samsung ay daabacaysay Dhowrkii bilood ee la soo dhaafey waxay shirkaddu ku sameysay dhowr isbeddel. Qaybteeda moobilku waxay bilaabaysaa inay lumiso faa'iidadaSidaa darteed, soo saaraha ayaa lagu qasbay inuu si aad ah u yareeyo noocyadiisa kala duwan ee casriga ah.
Xitaa waxaa lagu xamanayay suurtagalnimada taas JKShin, oo hadda ah agaasimaha guud ee Samsung waxay ahayd inuu ka tago shaqadiisa. Ugu dambayntii waxaa la xaqiijiyay in agaasimaha guud ee soosaaraha Kuuriya uu heli doono fursad labaad oo uu ku toosin karo madaxa shirkad bilawday inay yeelato dhibaatooyin daran. Dabcan, Samsung waxaa ku socda isbadallo dhowr ah oo ku saabsan hoggaanka shirkadda.
Samsung waxay diyaarinaysaa isbeddelo ku saabsan maamulka sare ee shirkadda
In kasta oo hadda ay yihiin warar xan ah oo aysan jirin wax la xaqiijiyay, qof ku dhow aagga sharafta leh ee Samsung ayaa xaqiijiyay in saddex ka mid ah dadka sida tooska ah u soo wargeliyay agaasimaha guud ee Samsung ay ka tagayaan shaqooyinkooda iyagoo ku raad jooga maareeyayaasha kale iyagoo leh fikradda ah si loo cusbooneysiiyo shaqaalaha hoggaanka maamulka ee shirkadda weyn ee Kuuriya.
Mid ka mid ah dhaawacyada ugu caansan waxaa noqon doona midka DJ Lee, madaxa suuq geynta Samsung. In kasta oo ay run tahay in warar xan ah horay loo maqlay oo ku saabsan suurtagalnimada in shaqada laga ceyriyay Lee, marka la isku daro xogtan qarsoon waxay iska cad tahay DJ Lee wuxuu ka tagi doonaa waaxda suuqgeynta ee soo saaraha Kuuriya.
Dhinaca kale dalacsiinta maamulka ayaa si weyn hoos loogu dhigi doonaa, kuwaas oo sanadkan gaari doona 165 maareeyayaal cusub. Tallaabo macquul ah oo Samsung ay ku doonayso inay ku xakameyso kheyraadkeeda isla markaana ay ku saxdo dhibaatooyinka dhaqaale ee haysta.
Maskaxda ku hay intaas oo dhan macluumaadkan ma ahan mid rasmi ahIn kasta oo la tixgelinayo ilaha suurtagalka ah iyo in warar xanaaq la mid ah horay loo maqlay, haddana waxaa la filayaa in Samsung ay ugu dambeyn sameyn doonto dhaqdhaqaaqyadan.
Samsung waxay ubaahantahay isbadal si deg deg ah loogu soo ceshado sharaftii lumisay. Ma noqon karto in shirkad ku gacan sareysey qadka taleefanka gacan bir ah ay u ogolaatay inay hesho dhul aad u badan. Waan arki doonaa haddii iibka Samsung Galaxy Note 4 iyo waxa la filayo Samsung Galaxy S6 Waxay ka caawiyaan dib u soo celinta shirkadda soo saaraha Seoul.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung waxay diyaarineysaa isbeddello si ay u xalliso dhibaatooyinka dhaqaale
Intaas oo dhami waxay noqon doonaan kuwo aan faa iido lahayn ilaa iyo inta Samsung ay ixtiraamayso macaamiisheeda iyaga oo iska illaaway markay iibsadaan taleefannadooda.
Wixii la beeray waa la goostay.
Waan ku raacsanahay kan wax faaleeyay, guran midhaha waxaad beertid. Taasi waa sababta Samsung ay si xun u sameyneyso, waxay ilawday waxa ugu muhiimsan, macaamiisha waa sida siyaasiyiinta markay dhib ku jiraan, waxaa jira kun shey oo ay bixiyaan, laakiin mid ayaa ku daalaya in la qabto mid ka mid ah waxa aanan aheyn, taas oo iyaga ku kici karta. Waxay cusbooneysiiyaan qalabkayaga sidaas darteedna farxad ayey nooga dhigayaan mana lahan dhibaatooyin ay hadda heystaan, laakiin waxay aaminsan yihiin inay aad u awood badan yihiin isla markaana boqortooyooyinkii waaweynaa ay soo dhacaan.